Sorona Masina ny 07/02/2022 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 07/02/2022
1 Mpanj. 8, 1-7. 9-13
Nentiny teo amin’ny fitoerany ny fiara faneken’ny Tompo, ao amin’ny fitoerana masina indrindra ka nameno ny tranon’ny Tompo ny rahona.
Tamin’izany andro izany, novorin’i Salômôna tao aminy, tany Jerosalema, avokoa ny loholon’i Israely, sy ny lehibe rehetra isam-pokony, ary ny filoham-pianakavian’ny zanak’i Israely, mba hamindra ny fiaran’ny faneken’ny Tompo avy amin’ny tanànan’i Davida, izany hoe any Siôna. Ka nivory tao amin’i Salômona mpanjaka avokoa ny lehilahy rehetra amin’i Israely, tamin’ny fety, amin’ny volana Etanima, volana fahafito. Nony tonga ny loholona rehetra amin’i Israely, dia nentin’ny mpisorona ny fiara. Nentiny ny fiaran’ny Tompo mbamin’ny trano lay fihaonana sy ny fanaka voahasina rehetra izay tao amin’ny trano lay, ka ny mpisorona sy ny Levita no nitondra ireo. Ary i Salômôna mpanjaka sy ny fiangonan’i Israely rehetra izay nantsoiny ho eo aminy, dia niaraka taminy teo anoloan’ny fiara. Ondry sy omby tsy hita isa sy tsy tambo isaina noho ny hamaroany no novonoiny ho sorona. Dia nentin’ny mpisorona teo amin’ny fitoerany ny fiaran’ny faneken’ny Tompo, dia tao amin’ny fitoerana masin’ny trano, ao amin’ny fitoerana masina indrindra, teo ambonin’ny elatry ny kerobima. Fa namelatra ny elany tambonin’ny fitoeran’ny fiara ny kerobima ka nanaloka ny fiara sy ny baony teo amboniny. Tao anatin’ny fiara tsy nisy afa-tsy ny takela-bato roa, napetrak’i Môizy tao, tany an-tendrombohitra Hôreba, fony ny Tompo nanao fanekena tamin’ny zanak’i Israely, tamin’ny nivoahany avy tany amin’ny tany Ejipta. Nony nivoaka avy tao amin’ny fitoerana masina ny mpisorona dia nameno ny tranon’ny Tompo ny rahona, ka tsy nahajanona hanao ny fanompoany tao ny mpisorona, noho ny amin’ny rahona, fa nameno ny tranon’ny Tompo ny voninahitry ny Tompo.
Salamo 131, 6-7. 8-10
Fiv.: Midira ato an-trano fonenanao re, ry Tompoko!
Indro lazaina hoe any Efrata ny fiarany, anatin’ny saha manodidina eo no napetrany! Midira ao an-tranon’ilay Masin’ny Masina! Midira ao an-kianjany, miankohofa anoloany!
Midira ato an-trano fonenanao re, ry Tompoko! Ka ento mba hiditra ilay Fiaranao Masina. Ny olam-boahosotra anie hitandro ny rariny. Hifaly, hihoby, hidera Anao ny mpivavaka! Ny tavan’ilay voahosotra aza atosika, tsarovy i Davida mpanomponao re, ry Tompoko!
Araikao amin’ny fanambaranao ny foko, ry Tompo, ary ny Lalànao no aoka hanenika ahy.
Mk. 6, 53-56
Izay rehetra nanendry Azy dia sitrana.
Tamin’izany andro izany, nony tafita i Jesoa sy ny mpianany, dia nitody tao Genezareta ka niantsona teo. Ary rahefa niala tao an-tsambo kely izy ireo, dia nahalala an’i Jesoa niaraka tamin’izay ny olona, ka lasa nitety ny manodidina, ary rafitra nitatitra ny marary tamin’ny fandriana ho any amin’izay reny fa misy Azy. Na taiza na taiza nalehany, na tamin’ny vohitra, na tany an-tanàna, na tany an-tsaha, dia napetraky ny olona teo an-kianja ny marary, sady niangavy taminy mba havelany hanendry na dia ny sahondran’akanjony ihany aza, ka izay rehetra nanendry Azy dia sitrana.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1148 s.] - Hanohana anay